EPhafu - Beaches kubo bonke
isiqhingi Emangazayo nge umlando onothileko, iqandiswe sebuningini sezakhiwo ku kwindlela ngamunye, itshana ngamunye. It - naseKhupro, nase ngamunye isivakashi salo uhlangana ngendlela ekhethekile.
Naphezu kweqiniso lokuthi lesi siqhingi elincane, ihlukaniswe yaba izingxenye eziningana, okokuqala kunakho konke, ku esiGrekini nabaseTurkey-Turkish kungene ingxenye olusenyakatho lwalesi siqhingi futhi cishe isigamu sezindela inhlokodolobha Nicosia; lonke isiqhingi eyayihlala amaGreki kwaba endaweni yayo zitholakala yonke edolobheni siKotilandi. zokungcebeleka Iningi ezinkulu - Limassol, Larnaca, Ayia Napa, Protaras futhi ePhafu. Ogwini kancane sihluke nomunye, ngakho ngokukhetha umuzi lapho ufuna uphumule, banake izincazelo zabo. Futhi, khetha indawo kuwufanele ecabangela lokho uhlobo iholide unesithakazelo. Uma ufuna ukubona nokuzwa eziningi, niya Limassol - itholakala cishe maphakathi oluseningizimu ye siqhingi futhi equidistant kuzo zonke izindawo ezijabulisayo. Kubantu abasha uhlela "hung for" lonke iholide e amaqembu kanye nemigoqo, ukhetho engcono kungaba uhambo Ayia Napa - inhliziyo nightlife alesi siqhingi.
abathandi ukuphumula okufanele uhlale Protaras: yobumfihlo nokuzola waleli dolobha iyisimangaliso. Kodwa uma udinga ukunethezeka ubukhazikhazi - kungcono ukuya ePhafu. Emabhishi kule ndawo yeholide ngeke akudumaza, kanye amahhotela - lo ngumuzi yodumo eKhupro.
EPhafu ugcwele nezakhiwo zasendulo kanye izikhumbuzo, ukuvakasha ukuthi ungathatha isikhathi off. Ngaphezu ezikhangayo, edolobheni elidumile zindlu yazo eminingi nokuthola Amabha: lapha ungakwazi lokuphuza cuisine wendawo, ulalele umculo, uxoxe bendawo. Ngo ePhafu disco eziningi namaqembu, kungani kumelwe ukhathazeke ngalokho ngizithola endaweni ehloniphekayo enjalo, hhayi zinkulu. Kodwa ukuya ezikhungweni ezifana zingcono kwesokunxele ngoba kusihlwa, futhi emini ujabulele amanzi yesiteleka okwesibhakabhaka futhi ohlanzekile, okusenza idume ePhafu. Ogwini lapha lingama enamadwala, ogwini sihlehliswe nasemathekwini kanye amachweba; okungenani Uma unganakile, kule ndawo, akusilo izwi elihle kakhulu kusukela iphuzu Ngenxa iholidi beach, izivakashi eziningi beze nakhu.
Zonke amabhishi eKhupro - komasipala, kungakhathaliseki ukuthi aseduze noma yiliphi ihhotela noma cha, futhi ePhafu amabhishi - iyathinteka. Ukuze kuxazululwe le nkinga nge ngezansi ezinamadwala kwaba ungakhululekile ukushaya sebuningini pontoons bese ukwehla olwandle senziwa kahle ngangokunokwenzeka. Nokho, olunesihlabathi ka ePhafu ayatholakala, abadumile sonke leso siqhingi. Isenzakalo esidume kunazo zonke - kuyinto Coral Bay noma Coral Bay: nomdweshu wezwe elisogwini mayelana 500-600 m kuyinto ezithambile isihlabathi segolide, amanzi - ahlanzekile ngendlela emangalisayo futhi efudumele. Ngisho uma uza lapha evela kude, ningangabazi, aniyikwenza okomkhiwane ukuthi uzokwazi uphumule ebhishi: ifakwe deckchairs nezambulela, nemishayo abaningi ngeke ucime ukoma kanye nendlala. Phakathi kwezinye izinto, Coral Bay ikhiphe unqambothi lomculo, futhi ngemva kokuqhubekela phambidlana kude ukuminyana zezivakashi, ungaba wedwa nemvelo. Nokho, lokhu akukhona ebhishi sandy kuphela, okuyinto idume ePhafu. Amabhishi anesihlabathi ukhululekile ngokufaka ulwandle - ke Geroskipou Beach futhi Lara. Abaningi, ngasendleleni, eziphawuleka ifulege blue, okuyinto waphinda ukhomba ubunjalo Cyprus. Hhayi-ke, uma unquma ukuvakashela Cyprus, ePhafu, lapho amabhishi Site bethamele ilanga, futhi bahlanganyele tinhlobo letehlukene amanzi ezemidlalo, ngokufudumele kuzovula wena iminyango amahhotela abo. Ngokungangabazeki, ngokukhetha ePhafu, ngeke uzisole - izindleko ukuzilibazisa lapha buyafaneleka futhi oluhambisana izinga lenkonzo olunikezwayo.
Kuyini ephawulekayo Big Ussuri Island?
Nizhny Novgorod zokudla nezindawo zokudla. Izibuyekezo kanye Izincomo
Nepovtorimst futhi elikhangayo esiqhingini Bali
Ibhuloho omude kunayo yonke imiswe Sochi emhlabeni
Isikhulumi esisezingeni eliphezulu Creative D100: ukubuyekezwa kanye nempendulo
Zhuber Brian: nokuphila kwangasese kanye nezemidlalo impumelelo skater eyaziwa
"Martini Royale" - ukujabula enkulu yokuphila
Aleksandr Poup: Biography emfushane ka Imbongi eyiNgisi
Umuthi 'Chymotrypsin ". Yokusetshenziswa
Isilinganiso sokuphakama nesisindo kwengane evele kusukela ebuntwaneni